Sifuna uQhankqalazo lukaWonkewonke lokwenyani oluchasene nentlupheko, umbane ophezulu, amaxabiso aphezulu okutya nawepetrol, ilabour brokers, ukunqongophala kwezindlu, ukungaphangeli, njalo njalo
Sifuna uQhankqalazo lukaWonkewonke lokwenyani oluchasene nentlupheko, umbane ophezulu, amaxabiso aphezulu okutya nawepetrol, ilabour brokers, ukunqongophala kwezindlu, ukungaphangeli, njalo njalo.
Abasebenzi bafuna ukulwa kodwa inkokheli ezingabathengisi zikaCosatu, SACP, zifaka iziqhoboshi, inkohliso, nokutyhafisa abasebenzi.
UCosatu unezicwangciso zoqhankqalazo losuku olunye ngomhla 7th kaMatshi oluchasene ne labour brokers ne toll roads. Kodwa okuyinyani oku kukuba nje qha abasebenzi behle umsindo. UQhankqalazo lukaWonkewonke linoku yaye kufanele libekwe njengento yemihla ngemihla njengendlela yokuzabalaza echasene norhulumente. Ngo 2010 xa abasebenzi bakarhulumente bebekuqhankqalazo inkokheli zikaCosatu nezeSACP zazile ukuba ukuba abasebenzi bemizi mveliso (industrial workers) namajoni aphumile ukuzokuxhasa uqhankqalazo, ekugqibeleni luyakuphelela ekubeni luqhankqalazo oluchasene norhulumente wonke wongxowankulu. Inkokheli zikaCosatu nezeSACP zaluphelisa uqhankqalazo ukusindisi urhulumente. Kusuku olunye inkxaso yoqhankqalazo nguwonkewonke eyayizakuqalisa ngalo, izihlwele zaseMozambique zaphakama ngokuchaseneyo nokunyuka okungathethekiyo kwixabiso lombane, lokutya namanzi. Ngokuphelisa uqhankqalazo, iinkokheli zikaCosatu zashiya izihlwele zaseMozambique zingenabani.
Intsingiselo yosuku olunye loqhankqalazo lukaCosatu, okanye ukuhlala ezindlini (stayaway) kukubonisa mhlophe yaye nekhwelo kubasebenzi ukuba babophe ibhanti. I-ANC ibeselulawulweni iminyaka elishumi elinesibhozo. Umgangatho wentlupheko wenyukile; ukwanda kwabamnyama abakumgangatho ophakathi kubephezu kwamagxa abasebenzi. I-ANC iphume phandle ngokucacileyo ngokuchaseneyo nabasebenzi ngokusayina i labour brokers. I-ANC izama ukugudisa ubukhali bokusebenzela ii agents kodwa kusala iyenye indlela yobukhoboka belixesha (morden slavery). Ukuvotela iANC kukuvotela ubukhoboka belixesha. Inkokheli zikaCosatu sele zihleli norhulumente zithengisa umlo ochasene ne labour brokers ngokuvuma imithetho emitsha, 'ukuyiqinisa' kodwa ngokwenyani bezinzisa iimeko zobukhoboka. Ii-labour brokers zidalwe ngama impiriyali (inkampani ezinkulu) ukunyusa iingeniso zazo ezinkulu yaye zahlulahlule abasebenzi. Iinkokheli zikaCosatu zikhusela ama impiriyali emsindweni wabantu ngokwenza umlo ochasene ne labour brokers endaweni yentsusa ye labour brokers, inkampani zama impiriyali kanye. Inkokheli zikaCosatu ziyawohlula umlo ochasene ne labour brokers kumlo ochasene nenkampani ezinkulu, odla bodwa abahlanu, abo ulawulo lwesambuku sobutyebi boMzantsi Africa, lukubo. Ezinkampani zintlanu zezi: Anglo American, Old Mutual, Liberty Life, Sanlam, Rembrandt. Ezinkampani zintlanu zama impiriyali zezona ntloko zibange ii labour brokers zakhiwe apha. Ngolo hlobo nawuphina umlo ozimiseleyo ochaseneyo ne labour brokers kufuneka woyise ezinkampani zama impiriyali
Ingxaki yobungxowankulu behlabathi nendima yamaStalin neyenkokheli zikaCosatu
Inkokheli zikaCosatu zishiya abasebenzi bezilwela ngokwabo, icandelo necandelo yaye ngolo hlobo zisohlulahlula umlo wabasebenzi. Indima yokuthengisa yenkokheli zeSACP nezikaCosatu ibonakale ekunyanzeliseni umyalelo wabasebenzi bahlele phantsi ku 8,6% nangona ixabiso lemali ekutyeni labasebenzi (workers inflation) limi kwi 30%, ekubeni kananjalo bawubekele emva kwendebe yehlabathi ka 2010 umlo wabasebenzi. Inkokheli kananjalo zalile ukwenza umyalelo wabasebenzi woqhankqalazo likawonkewonke oluchasene namaxabiso aphezulu okonyuka kombane. Ngo 1980's xa uMzantsi Africa wawukwimeko ephambi kwemeko yotshintsho olululo (pre-revolutionary situation), inkokheli zeSACP nezikaCosatu zazinqanda izihlwele zabantu ngokubetha ikhwelo lokuhlala ezindlini (stayaway) endaweni yamaqhankqalazo kuhlalwe kwimizi-mveliso.
Kusukela kwi 1900's ihlabathi belahlukahlukene ngokugcweleyo phakathi kwama impiriyali yaye isigaba sexesha sokonakala saqalisa. Indlela kuphela ama impiriyali angandisa ifuthe lawo yabangokokulwa namanye ama impiriyali. Kumashumi eminyaka asandukudlula khange kubekho ukwanda jikelele kwizinto zokusebenza. Ngo 2009 kuphela ongxowankulu bagxotha emisebenzini ngaphezulu kwamashumi amahlanu ezigidi zabasebenzi kwihlabathi liphela (over 50 million). E-Yurophu naseMelika, abasebenzi abaninzi sele bethotyelwe imivuzo nemeko zabo zokuphila, ngelilixa abanye banyanzeleke ukuba bathathe umhlala phantsi kwilixa elizayo. Kumazwe azizithanga (semi-colonies) njengo Mzantsi Africa, Argentina, Bolivia, Zimbabwe, njalo njalo, ongxowankulu nama impiriyali anyusa iingeniso zawo ngokunyanzelisa ukuthotywa kwemivuzo yaye kwangaxesha linye, anyuse amaxabiso okutya, ezindlu, umbane kakhulu nexabiso lezothutho. Kubekho intshukumo ezininzi zabasebenzi ehlabathini. Siphila kwisigaba sexesha apha imizabalazo nje wesininzi wokuphila ujika ube ngowezopolitiko. Bonke orhulumente bongxowankulu baphantsi kwengozi yokuthathwa ulawulo sisininzi sabasebenzi.
Amalungiselelo oQhankqalazo lukaWonkewonke olungenasiphelo
Ongxowankulu-ama impiriyali ngabo abasilambisayo. Kungunobangela wokuba sibeth' ikhwelo yaye sigqale kubo nakwii agents zabo kurhulumente. Kungunobangela wokuba sifuna uQhankqalazo lukaWonkewonke olungenasiphelo. UQhankqalazo lukaWonkewonke lungakhula lubeyindlela yabasebenzi bathabathele ulawulo ezandleni zabo. Umbuzo otshisayo ngowokuba: lungenziwa njani oluQhankqalazo lukaWonkewonke luphumelele? Kuqala kuyimfuneko kwakhiwe inkqubo yamabango (programme of demands), eqokelela bonke abasebenzi ngokuchaseneyo notyakatyo lwama impiriyali kunye nee agent zawo kurhulumente. Siyabona ngokucacileyo ukuba iinkokheli zeSACP nezikaCosatu zifuna intshukumo yosuku olunye abasebenzi behle umsindo, ngelilixa zifihla (disguise) ezintshukumo njenge ngo'qhankqalazo lukawonkewonke'.
Imfuneko yokwakhiwa kweekomiti zoqhankqalazo kumzi mveliso ngamnye, migodini, ezifama, kwindawo zonke zokusebenza, kwindawo zonke zokuhlala amajoni, kwingingqi zonke zabasebenzi, kungakhathali nokuba abasebenzi bangamalungu okanye hayi emanyano, okanye ukuba ahambiselana noCosatu okanye hayi. Ezikomiti zoqhankqalazo kufuneka zithumele abameli kumabhunga oqhankqalazo endawo, wommandla nakuzwelonke, ukwenza amabango abasebenzi abemanye yaye kuqhutywe uQhankqalazo lukaWonkewonke nenkqubo yokwenyani yokuzabalaza echasene nongxowankulu nama impiriyali, hayi kuphela kuzwelonke, kodwa igqithiselwe kummandla nakwihlabathi. Imfuneko yeekomiti zoqhankqalazo kwingingqi zabasebenzi yaye kananjalo sibandakanye abameli babangaphangeliyo. Kufuneka sibeth' ikhwelo lentlanganiso zesininzi zabazali, abafundi kunye nootitshala kwandiswe iikomiti zoqhankqalazo. Kufuneka silungise iikomiti zokuzikhusela eziphantsi kweekomiti zoqhankqalazo. IIntlanganiso zamabhunga babameli babasebenzi ezidibeneyo zazo zonke imanyano kufuneka zimiswe - ezi kufuneka zibeth' ikhwelo leekomithi zoqhankqalazo zisekwe zizise inkxaso ngakumbi kumanywe abasebenzi ukusukela kwisigaba somgangatho (shopfloor level). Kula maqela ngamaqela kulemizabalazo ikhoyo ngakwiChapman's Peak, eHangberg, Tafelsig, Blikkiesdorp, Boiketlong, eyabancedisi benesi ezibhedlele inikwe indawo esisigxina, eyezindlu eziphucukileyo kufutshane nendawo zokusebenza, eyokunciphisa iveki lokusebenza, eyomsebenzi kumntu wonke, kufuneka ibesentloko. Kufuneka sifune inkxaso yabasebenzi basemigodini abagxothwe kwi Impala Platinum - ukuba babuyiselwe emisebenzini ngaphandle kwemiqathango, njalo njalo. Kufuneka sixhase isininzi sabantu baseSiriya ngokuchaseneyo notshabalaliso lwabo ngurhulumente kaAssad onguvumakonke wama impiriyali. Masijike wonke umzimveliso, umgodi, ifama zorhwebo, zibe yiTahrir square! Masiphakamise ibanner yePalestina ekhululekileyo ngorhulumente wabasebenzi nokuthabatha ulawulo lorhulumente wakwaSirayeli kunye nabo bonke orhulumente abaxhaphazayo ehlabathini. Masimanyane njengabasebenzi sixhothe ama impiriyali eDRC, Egypt, Libya, Tunisa, kwiAfrika yonke!
Umvuzo olingana nomsebenzi
Ukupheliswa kwamsinyane kokukhesela ne labour brokers
Makuxuthwe zonke izinto zokuphila zama impiriyali, ngaphandle kokuzihlawula, zibekwe phantsi kolawulo lwabasebenzi
Phantsi ngezivumelwano zeminyaka emininzi- imivuzo kufuneka inyuke xa amaxabiso enyuka
Yahlulahlula umsebenzi phakathi kwabo bonke abo bakwaziyo ukusebenza, ngaphandle kokuphulukana nemivuzo
Phelisa iTRA's (njenge Blikkiesdorp) - ezi aziyonto kuphela zinkampu zengcinezelo- sibeth' ikhwelo lezindlu eziphucukileyo, irenti ephantsi, kumntu wonke, kufutshane nendawo zokusebenza kuxolelwe abangaphangeliyo, abemivuzo ephantsi nabarhola umhlala phantsi
Xhotha inkokheli zeSACP nezikaCosatu ezenza izivumelwano nongxowankulu kunye norhulumente weANC ukuba ubukhoboka belixesha buhlale (labour brokers)
Hlanganisela uQhankqalazo lukaWonkewonke, hayi ukuhlala ezindlini (stayaway)
Kufuneka sihlanganisele iikomiti zoqhankqalazo lukaWonkewonke silungiselele ukuhlala phakathi kwindawo zokusebenza. Oku kamsinya kuzamisa umbuzo wokuba ngubani ophethe olona lawulo. Kufuneka sibeth' ikhwelo kubasebenzi kummandla kunye nabakumazwe ama impiriyali anjengeMelika, iBrithane, France, Jamani, Greece, Portugal, eSpain bazibandakanye nathi. Abasebenzi kufuneka baqhawule umanyano lwabo neANC neSACP yongxowankulu. Ngaphandle ngenkokheli ezihambisana nongxowankulu!
Phambili kwintlangano yotshintsho olululo yabasebenzi, njengenxalenye yokuseka kwakhona kweFourth International!
Phambili kulawulo lwabasebenzi! Phambili kwiSocialism!
Ngabasebenzi abaselulawulweni kuphela abanokufezekisa amabango ethu! Basebenzi behlabathi manyanani, akukho nto kufuneka siphulukane nayo ngaphandle kwamatyathanga ethu!
WIVL ph 021 4476777 or ph 0822020617